Trump Oo Ku Hanjabay in Uu Dhaqaalaha Ka Jari Doono Dowladaha Doonaya in Ay Kasoo Horjeestaan Go'aankiisi Qudus.
Thursday December 21, 2017 - 08:22:45 in Wararka by Super Admin
Dowladda Mareykanka ayaa walaac xooggan ka muujinaysa in qaraarkii uu bilaawgii bishaan soo saaray Donald Trump ee magaalada Qudus uu ugu aqoonsaday caasimadda Yahuudda lalaalo.
Kulan maanta gelinka dambe lafilayo in uu yeesho 'Golaha Ammaanka' ayaa looga doodayaa go'aankii Mareykanka ee carada badan dhaliyay, ilo wareedyo ayaa sheegaya in inta badan dowladaha xubnaha ka ah Q,Midoobe ay u codeyn doonaan laalidda go'aankii Trump.
Diblumaasi sare oo katirsan Q.Midoobe oo ku sugan magaalada New York ayaa wakaaladda wararka Faransiiska u sheegay in dhammaan dowladaha ka jira caalamka islaamka marka laga reebo Sacuudiga iyo Imaaraatka ay ucodeyn doonaan in lalaalo go'aanka Trump halka dowlaha qaaradda Yurub iyo Laatiin America ay u codeyn doonaan in la laayo qaraarka Trump.
Dowladda Mareykanka oo ka cabsi qabtay in la carqaladeeyo go'aankii ay ku taageertay Yahuudda ayaa digniin u dirtay dowladaha isku diyaarinaya in ay u codeeyaan qaraarka horyaal 'Golaha ammaanka'.
Donald Trump oo saxafiyiinta kula hadlayay aqalka cad ayaa ku hanjabay in dhaqaalaha ay ka jari doonaan dowladaha isku daya in ay kasoo horjeestaan go'aankiisa "Dowladahaas waxay naga qaataan malaayiin doollar ama balaayiin doollar, haddana inaga ayay naga hor imaanayaan, hagaag, codbixintaas waan la soconaa" ayuu yiri Trump.
Sidoo kale safiiradda Mareykanka ufadhida Xarunta Q.Midoobe ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay magacyada safiirrada dowladaha doonaya in ay u codeeyaan qaraarkan, Mugdi badan ayaa ku jira mowqifka ay dowladda Masar qaadan doonto sababtoo ah lacago malaayiin dollar ah ayay bil walba ka heshaa dowladda Mareykanka.
Waxaa la saadaalinayaa in qaar kamid ah dowladaha dabadhilifyada ah ee caalamka islaamka kajira ay u hoggaansamaan Handadaada Trump ka timid ayna ka baaqdsadaan in ay qaataan tallaab loogasoo horjeedo in Qudus caasimad u tahay Yahudda.